က်ေနာ္ တို႔ ကိုဗစ္ကို တိုက္ေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ကို ျပန္စဥ္းစားရပါေတာ့ မယ္ – Let Pan Daily
က်ေနာ္ တို႔ ကိုဗစ္ကို တိုက္ေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ကို ျပန္စဥ္းစားရပါေတာ့ မယ္
Let Pan | September 21, 2020 | Local News | No Comments
က်ေနာ္ေတြးမိတာေလးပါ။ က်ေနာ္တို႔ ကိုဗစ္ကို တိုက္ေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္စဥ္းစားရပါေတာ့မယ္။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲမွာ ရန္သူေခၚရာေနာက္ကို လိုက္တိုက္ေနရရင္ ဘယ္ေတာ့မွမေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ War Game ေဆာ့လာဖူးတဲ့ သူတိုင္းသိပါတယ္။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကိုႏိုင္ခ်င္ရင္ ရန္သူ႔ကိုကိုယ္ခင္းတဲ့ အကြက္ထဲ ဝင္ေအာင္ ပုံသြင္းရပါတယ္။ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ရပါတယ္။ ႀကိဳစဥ္းစားရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္တိုက္မယ့္အကြက္ကို ျပည္သူလူထုက ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ခ်ျပရပါတယ္။ ရွင္းလင္းစြာအသိ ေပးရပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ဟာ ကိုဗစ္ကဝင္တိုက္မွ လိုက္ခု ခံေနရင္ အၿမဲတမ္းခံစစ္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအင္အားမရွိပါ။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲမွာ ကိုယ့္အင္အားကို အေတာ္တြက္ခ်က္ရပါတယ္။ ကိုဗစ္ကို ဘယ္လိုပုံျဖစ္ေစခ်င္သလဲ? Flatten curve (ကူးစက္မႈကို ေလ်ာ့ေအာင္) လုပ္ၿပီး တိုက္ မွာလား? တ႐ုတ္မွာလုပ္သလိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကိုင္မလား? အဲ့လိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အင္အားရွိသလား? သူ႔လိုနယ္စပ္ေတြ တင္းက်ပ္စြ ာပိတ္ႏိုင္မလား? ရသေလာက္ Test စစ္ပစ္ႏိုင္သလား? သူတို႔လိုေငြအင္အားရွိသလား? ကိုယ္ဘယ္လို ရန္သူကို စစ္ျမဴၿပီး ကိုယ္တိုက္ခ်င္တဲ့ အကြက္ထဲဝင္ေအာင္လုပ္မလဲ?
ေရးရင္အရွည္ႀကီးပါ။ အနီးကပ္မွ လူေတြဒီေလာက္ကူးစက္ လို႔ ဒီေလာက္ေသလို႔ ဒါလုပ္မယ္ဆိုတာထက္။ လူေတြဒီေလာက္ပဲအကူးခံမယ္။ အဲ့ဒီကေန ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေအာင္ ေလ်ာ့ခ်မယ္။ ကိုယ္ေတြမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၊ ပစၥည္းပစၥယ၊ ေငြအင္အားကအစဒီေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ကိုယ္ဘာလုပ္မလဲဆိုတာႀကိဳေတြးရပါမယ္။ ဒါေတြကို အခုမွေျပာတာမဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္ျဖစ္ေစခ်င္တာေတြကို အေစာပိုင္းစစျခင္းကတည္းက ေရးဖူးပါတယ္။ အေစာႀကီးကတည္းက ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈဗဟိုဟာ ရန္ကုန္ဆိုတာႀကိဳတြက္လို႔ရပါတယ္။ လူေတြထူထပ္စြာေနၾကတာရယ္။ ဆုံမွတ္က်တာကိုး။ ျပန္ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ “ကိုဗစ္ကိုဘယ္လိုအႏိုင္ယူမလဲဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးပါ။”
အခုက်ေနာ္တို႔ ညီၫြတ္စြာနဲ႔ အစိုးရကိုဝိုင္းကူမွ ရပါေတာ့မယ္။ က်ေနာ္အခုေျပာရတာက က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳတင္ၿပီး စစ္ပြဲတစ္ပြဲကို ကိုယ္အႏိုင္ရလိုတဲ့ပုံသြင္းယူတဲ့ mindset ထားဖို႔ေျပာေနတာပါ။ #ဒါျဖစ္မွဒါလုပ္မယ္ဆိုတာထက္ ကိုယ္ေတြက ဒါျဖစ္ေအာင္ဒါလုပ္ကိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ကိုခ်ေစခ်င္တာပါ။ အခုနယ္ေတြမွာ မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳတင္စီမံရပါေတာ့မယ္။ နယ္ေတြကိုျပန႔္သြားရင္ က်ေနာ္တို႔အင္အားအရမ္းက်ဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္။
စစ္တို႔ရဲ႕သေဘာသည္ တစ္ေနရာကို ျမန္ျမန္တိုက္ၿပီး ျမန္ျမန္ ဇာတ္လမ္းျဖတ္ရပါတယ္။ ေရရွည္ဆြဲတိုက္တဲ့စစ္ပြဲတိုင္းမေအာင္ျမင္ပါ။ က်ေနာ္ထပ္ေျပာပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ နယ္တိုင္းမွာ စစ္ပြဲတိုက္ဖို႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမလုံေလာက္ပါ။ ဆြမ္ဇုက ” ေနရာတိုင္းမွာစစ္တိုက္ရရင္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ၿပီး စစ္ရႈံးတတ္ပါတယ္။ နယ္ေတြကိုပါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကပါ။” အဓိကေျပာလိုတာက ဆြမ္ဇုေျပာခဲ့ဖူးသလိုပဲ “စစ္ပြဲတစ္ပြဲမွာ ရန္သူေခၚရာေနာက္ကို လိုက္တိုက္ေနရရင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကိုႏိုင္ခ်င္ရင္ ရန္သူ႔ကိုကိုယ္ခင္းတဲ့ အကြက္ထဲဝင္ေအာင္ ပုံသြင္းရပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ Objectives ခ်ၿပီး Plan, Do, Check, Act လုပ္ၾကပါ။ “ႀကိဳလုပ္ၾကပါ။” ေနာက္ဆုံးမိနစ္မွ အမိန႔္မခ်ၾကပါနဲ႔။ ျပည္သူလူထုကလည္း အစိုးရကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးပူးေပါင္းကူညီၾကပါ။ ဒီကိုဗစ္စစ္ပြဲဟာ အစိုးရတင္တိုက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြတင္တိုက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ “ကိုဗစ္စစ္ပြဲဟာ အားလုံးနဲ႔ဆိုင္တယ္။”
Richard Myo Thant
ကျနော်တွေးမိတာလေးပါ။ ကျနော်တို့ ကိုဗစ်ကို တိုက်နေတဲ့ မဟာဗျူဟာကို ပြန်စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ ရန်သူခေါ်ရာနောက်ကို လိုက်တိုက်နေရရင် ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ War Game ဆော့လာဖူးတဲ့ သူတိုင်းသိပါတယ်။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုနိုင်ချင်ရင် ရန်သူ့ကိုကိုယ်ခင်းတဲ့ အကွက်ထဲ ဝင်အောင် ပုံသွင်းရပါတယ်။ ကြိုတင်ကြံစည်ရပါတယ်။ ကြိုစဉ်းစားရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်တိုက်မယ့်အကွက်ကို ပြည်သူလူထုက ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင် ကြိုတင်ချပြရပါတယ်။ ရှင်းလင်းစွာအသိ ပေးရပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ ကိုဗစ်ကဝင်တိုက်မှ လိုက်ခု ခံနေရင် အမြဲတမ်းခံစစ် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အားမရှိပါ။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ ကိုယ့်အင်အားကို အတော်တွက်ချက်ရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကို ဘယ်လိုပုံဖြစ်စေချင်သလဲ? Flatten curve (ကူးစက်မှုကို လျော့အောင်) လုပ်ပြီး တိုက် မှာလား? တရုတ်မှာလုပ်သလိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်မလား? အဲ့လိုလုပ်နိုင်ဖို့ အင်အားရှိသလား? သူ့လိုနယ်စပ်တွေ တင်းကျပ်စွ ာပိတ်နိုင်မလား? ရသလောက် Test စစ်ပစ်နိုင်သလား? သူတို့လိုငွေအင်အားရှိသလား? ကိုယ်ဘယ်လို ရန်သူကို စစ်မြူပြီး ကိုယ်တိုက်ချင်တဲ့ အကွက်ထဲဝင်အောင်လုပ်မလဲ?
ရေးရင်အရှည်ကြီးပါ။ အနီးကပ်မှ လူတွေဒီလောက်ကူးစက် လို့ ဒီလောက်သေလို့ ဒါလုပ်မယ်ဆိုတာထက်။ လူတွေဒီလောက်ပဲအကူးခံမယ်။ အဲ့ဒီကနေ ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင် လျော့ချမယ်။ ကိုယ်တွေမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ ပစ္စည်းပစ္စယ၊ ငွေအင်အားကအစဒီလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကြိုတွေးရပါမယ်။ ဒါတွေကို အခုမှပြောတာမဟုတ်ပါ။ ကျနော်ဖြစ်စေချင်တာတွေကို အစောပိုင်းစစခြင်းကတည်းက ရေးဖူးပါတယ်။ အစောကြီးကတည်းက ပျံ့နှံ့မှုဗဟိုဟာ ရန်ကုန်ဆိုတာကြိုတွက်လို့ရပါတယ်။ လူတွေထူထပ်စွာနေကြတာရယ်။ ဆုံမှတ်ကျတာကိုး။ ပြန် ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ “ကိုဗစ်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပါ။”
အခုကျနော်တို့ ညီညွတ်စွာနဲ့ အစိုးရကိုဝိုင်းကူမှ ရပါတော့မယ်။ ကျနော်အခုပြောရတာက ကျနော်တို့ ကြိုတင်ပြီး စစ်ပွဲတစ်ပွဲကို ကိုယ်အနိုင်ရလိုတဲ့ပုံသွင်းယူတဲ့ mindset ထားဖို့ပြောနေတာပါ။ #ဒါဖြစ်မှဒါလုပ်မယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်တွေက ဒါဖြစ်အောင်ဒါလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာ ကိုချစေချင်တာပါ။ အခုနယ်တွေမှာ မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကြိုတင်စီမံရပါတော့မယ်။ နယ်တွေကိုပြန့်သွားရင် ကျနော်တို့အင်အားအရမ်းကျဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
စစ်တို့ရဲ့သဘောသည် တစ်နေရာကို မြန်မြန်တိုက်ပြီး မြန်မြန် ဇာတ်လမ်းဖြတ်ရပါတယ်။ ရေရှည်ဆွဲတိုက်တဲ့စစ်ပွဲတိုင်းမအောင်မြင်ပါ။ ကျနော်ထပ်ပြောပါမယ်။ ကျနော်တို့မှာ နယ်တိုင်းမှာ စစ်ပွဲတိုက်ဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်ပါ။ ဆွမ်ဇုက ” နေရာတိုင်းမှာစစ်တိုက်ရရင် အင်အားချည့်နဲ့ပြီး စစ်ရှုံးတတ်ပါတယ်။ နယ်တွေကိုပါ ကြိုတင်ကာကွယ်ကြပါ။” အဓိကပြောလိုတာက ဆွမ်ဇုပြောခဲ့ဖူးသလိုပဲ “စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ ရန်သူခေါ်ရာနောက်ကို လိုက်တိုက်နေရရင် ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုနိုင်ချင်ရင် ရန်သူ့ကိုကိုယ်ခင်းတဲ့ အကွက်ထဲဝင်အောင် ပုံသွင်းရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Objectives ချပြီး Plan, Do, Check, Act လုပ်ကြပါ။ “ကြိုလုပ်ကြပါ။” နောက်ဆုံးမိနစ်မှ အမိန့်မချကြပါနဲ့။ ပြည်သူလူထုကလည်း အစိုးရကို အတတ်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းကူညီကြပါ။ ဒီကိုဗစ်စစ်ပွဲဟာ အစိုးရတင်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်တိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ “ကိုဗစ်စစ်ပွဲဟာ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။”
ကောင်မလေး တယောက်ကြောင့် ကောင်လေး (၅) ယောက် Q ဝင် သွားရခြင်း ကြံကြံ ဖန်ဖန် ဖြစ်တတ်တယ်
စက္တင္ဘာ(၉)ရက္ ကစၿပီး အစိုးရ ႐ုံးဝန္ထမ္း အင္အား (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း သာ ႐ုံးတက္ရန္ ၫႊန္ၾကား
ထူးခြားပြီး အရမ်းစိတ်ဝင် စားစရာကောင်း တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စာသင် ကျောင်းလေး
မိုးကောင်း ရတနာ ကလေးဆေးရုံ ဖွင့်ပွဲကို တက်ရောက် ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ
ချစ်ရမှာ ကြောက် လို့ အပျိုကြီး လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ပရိသတ် ကို အကြံတောင်းလိုက်တဲ့ မေပန်းချီ
ကြည့်ရှု့သူ များပြားနေတဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ အရာတွေကို အလွယ်တကူ လုပ်ပြသွားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
“ပရိသတ် တွေ အံ့သြမဆုံး ဖြစ်စေမယ့် ခပ်ဆန်ဆန်း လုပ်ရတာ ကို နှစ်သက်သူ ပတ်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင်”
ကိုယ်ကျပ် ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပေါင်တံဖွေးဖွေးလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် မိလွန်းနေတဲ့ မေပန်းချီ
ဆက်ဆီကျကျ ရင်ခုန်သံ တွေ မြန်သွား ရလောက်အောင် အမိုက်စား ကပြ လိုက် တဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယို
အချစ်ရေး နဲ့ ပက်သက်ပြီး အထင်မှားနေတဲ့ သူတွေကို ထိထိမိမိ ပြောလိုက်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်